Kitra any Eoropa – Ampahefa-dalana: hidona ny Juventus sy ny Ajax Amsterdam | NewsMada
Kitra any Eoropa – Ampahefa-dalana: hidona ny Juventus sy ny Ajax Amsterdam
Klioba anglisy efatra, iray avy kosa ny an’i Pays-Bas sy Italia ary Portugal sy i Espaina. Tsy misy ekipa frantsay. Voalohany tato anatin’ny 10 taona, ny tranga toa izao, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra
Tontosa omaly tao Nyon, foibe toeran’ny firaisamben’ny baolina kitra eoropeanina (Uefa), ny antsapaka eo amin’ny dingana ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”. Hidona, amin’izany ny Juventus-n’i Cristiano Ronaldo sy ny Ajax Amsterdam.
23 taona aty aoriana, hiverina hidona indray ny roa tonta. Raha tsiahivina, niatrika ny famaranana, ho an’ity fifaninanana ity, izy ireo. Nivoaka ho mpandresy, tamin’izay ny Juventus de Turin. Hanala vela, amin-dry Ronaldo izany eto ny Ajax. Handray ny lalao mandroso, rahateo ry zareo Hollande.
Ho gidragidra ihany koa ny fihaonan’ny Manchester United sy ny FC Barcelone. Ny Barça, hany ekipa tsy mbola resy tamin’ity fifaninanana ity. Heverina fa hanana tombony ry Messi, noho izy ireo hampiantrano ny lalao miverina. Adin’ny samy Anglisy kosa ny an’ny Tottenham sy ny Manchester City, mitarika eo amin’ny fifaninanam-pirenena anglisy. Lalao mandroso atao any Tottenham.
Hifampitana amin’ny FC Porto-n’i Iker Casillas kosa ny Liverpool-n’i Sadio Mané sy i Salah. Raha ara-taratasy, manantombo ny Anglisy.
Ny 9 sy ny 10 avrily ny lalao mandroso ary ny 16 sy ny 17 avrily kosa ny fihaonana miverina. Zava-baovao tamin’ity ny fahafantarana avy hatrany ny fandaharan-dalao ho an’ny manasa-dalana. Hihaona amin’izay tafavoaka eo amin’ny Tottenham sy Manchester City, ny afaka eo amin’ny Ajax sy Juventus. Hikatroka kosa ny ho mpandresy eo amin’ny Manchester United sy Barcelone sy izay tafita eo amin’ny Liverpool sy ny FC Porto.
Lalao mandroso, ny 30 avrily sy ny 1 mey, ary ny lalao miverina, ny 7 sy ny 8 mey 2019.
-Ajax (Pays-Bas) #- Juventus (Italia)
-Liverpool (Angletera) # FC Porto (Portugal)
-Tottenham (Angletera) # Manchester City (Angletera)
-Manchester United (Angletera) # FC Barcelone (Espaina)